Soomaaliya, 28 January 2019
Deni oo gogol u fidinaya madaxda Soomaalida
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa sheegay inuu dhigo doono gogol ay iskugu imanayaan dhyinacyada Soomaaliya.
Faahfaahin laga bixiyey weerar lagu qaaday ajnabi ku xiran Muqdisho
Mas’uuliyiinta ciidanka Asluubta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shil ka dhacay xabsiga dhexe oo laba ka tirsan maxaabiista ay weerareen nin Brittan u dhashay oo absiga ku xiran.
Dagaal ka dhex billowday Shabaab iyo Daacish
Dagaal uu dhexeeya kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ayaa saaka waabarigii ka billoowday deegaanka Ceelka Miraale oo qiyaastii 70KM u jira magaalada Boosaaso.
Wabiga Shabeelle oo biyo yareeyey iyo cudurro ka dhashey
Garoowe: Hogaamiyeyaasha Soomaalida oo Is-cafis ku Baaqay
Haddaba madaxda ururada bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyay hadalada siyaasiyinta qaarkood ka jeediyeen magaalada Garawe xalay gaar ahaan kuwa ku baaqayey in la is cafiyo.
Ajnabi ku Xiran Muqdisho oo la Daawacay
Ninkan oo u dhashay dalka Biritan oo toddobaadkii hore loo gudbiyey xabsiga dhexe ee magaalada Muqdishu kadib markii lagu eedeeyey inuu halis geliyey nabadqabka dadweynaha iyo inuusan shaacinin walxo qarxa oo uu haystay xilli uu isku dayayey inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Muqdishu.
Garoowe: Deni oo la Caleema-saarayo
Magaalada Garowe oo loo diyaar garoobayo caleema-saarka madaweyne Deni waxaa ku sugan hoggaamiyayaal Soomaali ah oo kala fikir duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynayaashii ka horeeyey, madaxda maamul-goboleedyada iyo siyaasyiin kale.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaad ku dhageysan doontaan qoddobo uu ka mid yahay kufsi dhawaan magaalada Guriceel loogu geystay gabar da' yar, arrintaas oo afar nin dhalinyaro ah loo soo qabtay
Holaha Dowladda Maraykanka oo Dib loo Furay
Madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa saxeexay habeenimadii xalay heshiis ogolaanaya in dib loo furo hawlihii shaqo ee dawladda maraykanka oo hakad ku jiray.
Hormuud oo ka hadashay xarumo laga burburiyey
Shirkada isgaarsiinta Hormuud ayaa ka hadashay duqeyn iyo burburin ay sheegeen in ciidamo ka tirsan dowlada Kenya ay u gaysteen xarumo ay shirkada lahayd.
Faaqidaadda: Khilaafka siyaasadeed ee gobolka Soomaalida Ethiopia.
Sideed ka mid ah ciidamada Jubaland oo qarax lagu dilay
Ugu yaraan sideed askari ayaa geeriyootay kadib markii maanta barqadii miino dhulka lagu aasay ay la qaraxaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland.